Madaxweynaha Somaliland oo Xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Ingiriiska ee Somalia – Banaadir Times
Madaxweynaha Somaliland oo Xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Ingiriiska ee Somalia
By banaadir 3rd May 2021 19 No comment
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Ingiriiska, Amb. Kate Foster oo uu wehelinaayey Mr Stuart Brown oo ah madaxa xafiiska Ingiriiska ee Somaliland.
Kulan ay yeeshee labada dhinac ayaa waxaa lagaga wada hadlay qodobbo ay ka mid ahaayeen xoojinta xiriirka Somaliland & dowladda Ingiriiska, arrimaha diyaar garowga doorashooyinka Somaliland ee golaha wakiillada iyo deegaanka oo maalmo kooban ka dhiman yihiin.
Safiirka cusubna waxa ay dhinaceeda uga mahadnaqday horumarka, Dimuquraaddiyadda iyo nabadgelyada buuxda ee ay gaareen muddadaa soddonka sanno ah, iyadoo sheegtay inay ku faraxsan tahay booqashada ay ku timid Hargeysa, ka dawlad ahaanna ay dardar-gelin doonto hawlaha wada shaqayneed ee labada dhinac hore uga dhexeeyey.
Tirada dadka u dhintay cudurka Karoonaha Soomaaliya oo gaartay 471
By banaadir 26th March 2021